1 Beresosɛm 28 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
28 Dawid boaboaa Israel mpanyimfo+ nyinaa ano wɔ Yerusalem, mmusuakuw mpanyimfo,+ akuwakuw a wɔsom ɔhene no mpanyimfo,+ apem apem+ ne ɔha ha+ so mpanyimfo, mpanyimfo a wɔhwɛ ɔhene ne ne mma+ nneɛma+ ne wɔn nyɛmmoa+ nyinaa so, ne ahemfie mpanyimfo+ ne nnɔmmarima,+ ne mmarima akokodurufo a aka nyinaa. 2 Ɛnna Ɔhene Dawid sɔre gyinaa ne nan so kae sɛ: “Me nuanom ne me man, muntie me. Me de, na ɛda me koma so+ sɛ mesi homebea ama Yehowa apam adaka no na ayɛ yɛn Nyankopɔn nan ntiaso,+ na misiesiee me ho sɛ mesi.+ 3 Na nokware Nyankopɔn ka kyerɛɛ me sɛ, ‘Ɛnyɛ wo na wubesi ofie ama me din;+ woyɛ akõdi nipa, na woaka mogya agu.’+ 4 Yehowa, Israel Nyankopɔn paw me fii me papa fiefo nyinaa mu+ sɛ menyɛ Israel hene+ afebɔɔ; Yuda na ɔpaw no ɔkannifo,+ na Yuda abusua mu nso, ɔpaw me papa fie,+ na me papa mma+ mu nso, me na ogyee me toom+ sɛ memmɛyɛ Israel nyinaa hene; 5 (Yehowa ama me mma pii)+ na me mma nyinaa mu no, me ba Solomon+ na ɔpaw no sɛ ɔmmɛtena Yehowa ahenni agua+ a ɛwɔ Israel no so. 6 “Afei nso ɔka kyerɛɛ me sɛ, ‘Wo ba Solomon na obesi me fie+ ne m’adiwo; efisɛ mafa no ayɛ me ba,+ na me na mɛyɛ n’agya.+ 7 Na sɛ osi ne bo pintinn sɛ obedi me mmara nsɛm+ ne m’atemmusɛm+ so sɛnea ɔyɛ no nnɛ yi a, me nso mɛma n’ahenni+ atim akosi daa.’ 8 Migyina Israel, Yehowa asafo+ nyinaa anim, ka wɔ Onyankopɔn asom+ sɛ, monhwɛ nni Yehowa mo Nyankopɔn mmara nsɛm nyinaa so, na monhwehwɛ akyi kwan na moanya asase pa+ no adi, na mode ayɛ agyapade agyaw mo mma a wobedi mo akyi aba no akosi daa. 9 “Na wo, me ba Solomon, hu+ Onyankopɔn a wo papa som+ no no, na fa koma+ a edi mũ ne ɔkra+ mu anigye som no; efisɛ Yehowa hwehwɛ koma nyinaa mu,+ na ohu emu adwene nyinaa.+ Sɛ wohwehwɛ no a, ɔbɛma woahu no,+ na sɛ wugyaw no a,+ ɔno nso bɛtow wo akyene koraa.+ 10 Hwɛ, Yehowa na wapaw wo sɛ si ofie ma ɛnyɛ kronkronbea. Nya akokoduru na keka wo ho.”+ 11 Na Dawid de abantenten+ no ne ɛho adan, ne n’adekoradan,+ ne n’abansoro pia,+ ne pia mu mpia, ne mpata mmuaso+ dan no nsusuwso+ maa ne ba Solomon; 12 ɔde biribiara a Onyankopɔn nam honhom+ so de maa no ho nsusuwso maa no, Yehowa fie adiwo,+ ne adidibea+ a ɛwowɔ ho nyinaa, ne akwankyerɛ a ɛfa nokware Nyankopɔn fie akorade ne akorade a wɔayɛ no kronkron+ no ho; 13 ne asɔfo ne Lewifo no nkyekyɛm,+ ne Yehowa fie adwuma nyinaa, ne Yehowa fie adwuma anwenne nyinaa; 14 ne sika dodow a wɔnkari, sika a wɔmfa nyɛ ɔsom ho anwenne nyinaa, ne dwetɛ anwenne+ a wɔnkari mfa nyɛ ɔsom ho nneɛma nyinaa; 15 ne sika dodow a wɔnkari mfa nyɛ sika akaneadua+ ne ɛho sika akanea, sɛnea sika kaneadua ne sika kanea biara mu duru te; ne dwetɛ dodow a wɔnkari mfa nyɛ akaneadua ne ɛho akanea, sɛnea kaneadua biara dwumadi te; 16 ne sika dodow a wɔnkari mfa nyɛ apon a wɔhyehyɛ paanoo+ wɔ so de kyerɛ, ne dwetɛ dodow a wɔmfa nyɛ dwetɛ apon; 17 ne adinam ne nyaawa+ ne mpɔre a wɔde sika amapa ayeyɛ ne sika nkuruwa,+ sɛnea kuruwa biara mu duru te, ne dwetɛ nkuruwa, sɛnea kuruwa biara mu duru te; 18 ne sika amapa dodow a wɔmfa nyɛ aduhuam afɔremuka+ no, ne teaseɛnam+ no nsusuwso, kyerɛ sɛ, sika kerubim+ a wɔatrɛtrɛw wɔn ntaban mu akata Yehowa apam adaka so no. 19 “Wɔakyerɛw+ ne nyinaa ato hɔ efisɛ ná Yehowa nsa wɔ me so, na ɔmaa me ɔdan no nsusuwso+ nyinaa ho nhumu.” 20 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ ne ba Solomon sɛ: “Nya akokoduru,+ yɛ den na keka wo ho. Nsuro,+ na mmɔ hu+ nso, na Yehowa Nyankopɔn, me Nyankopɔn no ka wo ho.+ Ɔrempa wo+ na ɔrennyaw wo kosi sɛ wubewie Yehowa fie adwuma no nyinaa. 21 Na asɔfo+ ne Lewifo+ no nkyekyɛm a wɔde bɛyɛ nokware Nyankopɔn fie adwuma nyinaa ni; obiara a ɔwɔ adwuma biara ho nimdeɛ+ no, ofi ne koma mu+ bɛba abɛboa wo, na mpanyimfo+ ne ɔman no nyinaa bedi wo nsɛm nyinaa so.”
1 Beresosɛm 28